July 2021 - ShwengweGames
သာသနာ့ဘောင်မှ လူဝတ်လဲပြီးချင်း အလှူလုပ်ရန်ရုပ်ဖျက်ပြီး ဆေးတွေပစ္စည်း‌တွေလိုက်ဝယ်နေတာကြောင့် အထင်လွဲခံခဲရတဲ့ မင်းသမီးကြီး သိင်္ဂီထွန်း
July 31, 2021 by Shwengwe Games
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးကြီး သိင်္ဂီထွန်းကတော့ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက် သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေရသူများကို မကြည့်ရက်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်၊ ရှင်သီဝရိဂမုန်းပင်၊နဂါးဆက်ပင်တွေဟာအောက်ဆီဂျင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အတွက် သူမရဲ့အိမ်အနောက်မှာ စိုက်ထားတဲ့ အပင်တွေကို မျိုးပွားဖို့ သီလရှင်ဝတ်ကြီးနဲ့လုပ်နေတာကို မသင့်တော်ကြောင်း ပြောကြတဲ့အတွက် လူဝတ်လဲခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချက်ချင်း စီစဉ်လိုက်ရတာကြောင့် သိက္ခာမချလိုက်ရပဲ လူဝတ်လဲပြီး ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ ဆိုင်ကြီးဆိုင် ငယ်တွေကို ရုပ်ဖျက်ပြီး ဈေးဝယ်ပေးခဲ့ရပုံတွေကို မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်က သိင်္ဂီထွန်းရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ အခုလို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။သိင်္ဂီထွန်းကတော့ ရန်ကုန်မှာ လောဘသားတွေကြောင့် ဈေးကြီးပြီး ဝယ်မရတာတွေကို တစ်ဆိုင်ဝင် တစ်ဆိုင်ထွက်ဆေးနဲ့ အာဟာရဖြည့်စွက်စာတွေ ပြင်ဦးလွင်တွင် လိုက်ဝယ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ထဲမှာ ငွေသားပြတ်တဲ့အထိ ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူပြီး ကုသိုလ်ပြုရတဲ့အတွက် ပီတိဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်း ရေးသားထားပါတယ်။ ရုပ်ဖျက်ပြီး ဆေးတွေအများကြီး လိုက်ဝယ်နေတာကြောင့် ပြန်ရောင်းစားမယ့်သူလို့အထင်ခံခဲ့ရတာတွေကိုလည်းအမှတ်တရအနေနဲ့ ပြောပြထား ပါသေးတယ်။
ပြင်ဦးလွင်နဲ့ ရန်ကုန်တွင် သူမကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူနာတွေအကုန်လုံး သက်သာလာတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာကြည်နူးနေတာပါ။အောက်ဆီဂျင်စက်၊အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ အရည်များကိုလည်း လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ငွေသားများ လက်ထဲရလာပါ ထပ်မံလှူဒါန်းသွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်း ဝမ်းသာစွာဖြင့် ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လှူတန်းမှုများအား(၃၁) ဘုံ လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါအားလုံး ကုသိုလ်ရကြပြီး ၂၇.၇.၂၀၂၁ ည (၁၂:၃၀) မိနစ်တွင် အောက်ဆီဂျင်အခက်အခဲမရှိဘဲ ညင်သာစွာ ဆုံးပါးသွားတဲ့သူမရဲ့ ဘဘလည်း ကောင်းမွန်ရာ ဘုံဘဝသို့ ရောက်ရှိပါစေလို့ရေးသားဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် သိင်္ဂီထွန်းတစ်ယောက် လိုအပ်နေသူများကို ဒီ့ထက်မက ပိုမိုလှူဒါန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီသတင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။
မာယာများလွန်းတဲ့ ကိုဗစ်ကြောင့် ဖခင်ဆုံးခဲ့ရ‌တာမို့ သတိထားကြဖို့ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒ
July 31, 2021 July 31, 2021 by Shwengwe Games
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သက်ကြီးရေ အနု ပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင်ရပ်တည်အောင်မြင်နေပြီး ပရိ သတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ညီနန္ဒ ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။သူဟာဆိုပြည်သူတွေဘက်က ရပ် တည်ရင်း တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ (၅၀၅ – က) နဲ့ တရားစွဲဆို ခံထားရပြီး လွတ်မြောက်ရာကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ညီနန္ဒ ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာ လောလော လတ်လတ်ရက်ပိုင်းကပဲ ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူနေမကောင်းနေချိန်မှာ အနားမှာပြုစုခွင့်မရခဲ့ တာကို သူ့အနေနဲ့ဝမ်းနည်းနေခဲ့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာနဲ့ ကိုဗစ်ရဲ့မာယာများပုံတွေကိုအခုလိုပဲ ပရိတ်သက်တွေကို ဖော်ပြလာခဲ့ ပါတယ်။
”ကျွန်တော့အဖေနဲ့အမေကစမ်းချောင်း၊ … လမ်း၊ အမှတ်.., ၄လွှာမှာ နှစ်ယောက်ထဲနေကြပါတယ်…(၁၀.၇.၂၁) ရက်နေ့လောက်မှာ အမေက နှာစေး, ချောင်းဆိုး စ,ဖြစ်ပါတယ်… ၃ရက်လောက်နေတော့ အဖေ့ကိုကူးပါတယ်…ကျွန်တော် အဖေနဲ့အမေ့ဆီကို တစ်နေ့ဖုန်း ၄,၅ကြိမ်ဆက်ပြီးသောက်ရမယ့်ဆေး, စားရမယ့်အစားအသောက် (ကြက်ပေါင်း, ဌက်သိုက်), ရေနွေးငွေ့ရှူဖို (တစ်နေ့ ၃ကြိမ်), ဆားရေနဲ့ပလုတ်ကျင်းဖို (တစ်နေ့၃ကြိမ်) ဂရုတ စိုက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသမျှအားလုံး အမေက နေ့စဉ်မပျက်လုပ်ပေမယ့် အဖေက မလုပ်ခဲ့ဘူးဘာလိုမလုပ်တာလည်းဆိုတော့ အဖေကတစ်သက်လုံးအရမ်းကျန်း မာခဲ့ တာကိုးကျွန်တော့ထက်တောင်ပိုပြီးကျန်းမာတယ်… အဲလိုကျန်းမာလွန်းလိုလည်းအဖေကဒီတစ်ခါနှားစေး, ချောင်း ဆိုး ဖြစ်တာကို အရင်လိုပဲယူဆပြီး (၂၀.၇.၂၁) မှာ ရေချိးလိုက်ပါတယ်… အမေပြောပြလို သိသိချင်း ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တော့ အဖေက သိပ်လက်မခံချင်ဘူး
ကျွန်တော်သေချာ ချော့ပြောတော့မှလက် ခံတယ် ကျွန်တော်ပြောတာကို အဖေ ၃ ရက်ပဲနားထောင်ခဲ့တယ် (၂၄.၇.၂၁) မနက် ရေထပ်ချိးတယ် (၂၅.၇. ၂၁) နေ့လည်မှာတော့ အဖေ အောက်ဆီဂျင် ၆၅အထိကျပြီး အသည်းအ သန်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီး အကူအညီတွေ လိုက်တောင်းတော့ ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့် ဆရာ ဝန်မကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ကိုဝေဠုကျော်တိုရဲ့အကူအညီနဲ့ အဖေ့ကို အောက်ဆီဂျင်လုံးဝမ ပျက်အောင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်
(၂၅.၇.၂၁) တစ်ညလုံး (၂၆.၇.၂၁) အထိ အောက်ဆီဂျင်အဆက်မပျက်ပေးနိုင်ခဲ့လို သက်သာသွားပြီလို ကျွန်တော်တိုယူဆခဲ့ တယ် … ဒီရောဂါကြီးက အရမ်းမာယာများတယ် (၂၇.၇.၂၁) မှာ အဖေက အောက်ဆီဂျင်ပိုက်အတပ်မခံတဲ့အထိ စိတ်အလိုမကျတွေဖြစ်ပြီးဒေါသတွေကြီးခဲ့ တယ် … ဘာမှလည်းကျွေးလိုမရတော့ဘူး… တစ်သက်လုံးအရမ်းကျန်းမာခဲ့တဲ့အဖေက အခုလိုအိပ်ယာထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တပ်ထားရတဲ့အနေအထားကို ဘယ် လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေခဲ့တယ်
ကျွန်တော်ကတော့ အဖေရေချိးမှားသွားတယ်လိုထင်ပါတယ်(၂၉.၇.၂၁) မှာတော့ အောက်ဆီဂျင် ၆၀ လောက်အထိကျ ပြီး အဖေ့အသိစိတ်တွေ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်… V call နဲ့ ခေါ်ပြီးစကားပြောနေတဲ့ကျွန်တော့ကိုတောင် မမှတ်မိတော့ပဲ ည ၇:၃၁ မှာ အဖေဆုံးသွားခဲ့ တယ်အမေက အခုဆို လည်ချောင်းလေး နည်းနည်းယားတာလောက်ပဲရှိပါတော့တယ်
အမေ့ကို အကောင်းဆုံးလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ် ကျွန်တော်တိုပြည် သူတွေ ကျွန်တော့အမေလို အထူးဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့် ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို တိုက်ထုတ်နိုင်စေဖို မေတ္တာဖြင့်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ညီနန္ဒ “ ဟုဆ်ုပြီးရေးသားလာခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
Source: Nyi Nanda ( Facebook acc )
Credit: Celebrity Platforms
မုတ်သုန်လေအားကောင်းနေပြီး နောက် (၂)ရက်အတွက် မိုးကြီးနိုင်သော ဒေသများ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေအားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းနေပါသည်။
မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်း ချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့်
ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင် ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းအသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။
မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၃၀)မှ (၃၅)မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၇)ပေမှ (၁၀)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းမည်။နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။မိုးအသင့်အတင့် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်း ချက်။ မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။မန္တလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်း ရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
Categories Knowledge, မိုးလေဝသ
နိုင်ငံခြားက ဆေးရုံတစ်ခုမှာ တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးသွားတဲ့ ချစ်သူလေးအတွက် ဂုဏ်ယူနေတဲ့ မေမီကိုကို
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မေမီကိုကိုကတော့ Facebook ပေါ်မှာ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦးနဲ့မေတ္တာမျှနေတာပါနော်။ ဆရာဝန်လေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် မနာလိုသူတွေရဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခံခဲ့ရပါသေးတယ်နော်။
ဘယ်လိုပဲ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါပစေ တွဲလက်မဖြုတ်ဘဲ ကြိုက်လာခဲ့ကြတာ တစ်နှစ်တောင် ပြည့်တော့မှာပါနော်။ မေမီရဲ့ ချစ်သူဟာ အမေရိကားနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူဖြစ်တာကြောင့် အပြင်မှာ တစ်ခါမှမတွေ့ရသေးပါဘူးနော်။ အနေဝေးပေမယ့် ခိုင်မြဲတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေနဲ့ ချည်နှောင်ထားကြတာ အားကျစရာပါပဲနော်။
မေမီတစ်ယောက် ပညာရေးမှာ ထူးချွန်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဒီနေ့မှာလည်း ဆေးရုံတွင် ရာထူးတိုးသွားတဲ့ကောင်လေးအတွက် ဂုဏ်ယူနေခဲ့ပါတယ်နော်။ကဲ ပရိသတ်ကြီးလည်း အရည်အချင်းရှိတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ပျော်ရွှင်နေရတဲ့ မေမီအတွက် ကြည်နူးစေမယ့် စကားလေးတွေ ပြောပေးသွားကြပါဦးနော်။
ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း လုံးဝအဖမ်းမခံရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုထောက်ပြလာတဲ့ညီညီမောင် (စမ်း ချောင်း)
ပရိသတ်ကြီးရေ သုသုလို့ အများက ခေါ်ကြတဲ့ မိတ်ကပ်ညီညီမောင်ကတော့ အမေစုကိုချစ်ခင်သူတစ်ဦးပီပီနွေဦးတော် လှန်ရေးအစပိုင်းမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်နော်။စစ်ကောင်စီမှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့အခါမှာတော့သုသုတစ်ယောက် ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်နော်။စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ လိုင်းပေါ်မှာ ပလူပျံခဲ့စဉ်ကလက်ရှိရိုက်ထားတာမဟုတ်ကြောင်းအသေအလဲ ငြင်းဆန်ခဲ့သူပါနော်။
မကြာခင်မှာပဲအမှန်တရားပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရတော့ဘဲ ဝန်ခံလိုက်ရပါတယ်နော်။ ပုံမှန်အတိုင်း နေထိုင်စားသောက်ရင်း အခုချိန်ကျမှ ကိုဗစ်ရောဂါအတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ လှူဒါန်းရင်းလူဝင်ဆံ့လာအောင် ကြိုးစားနေပါပြီနော်။ ” ဆန္ဒတွေပြပြီး အဖမ်းလည်းမခံရဘူးနော်“ဆိုတဲ့ comment တစ်ခုကြောင့် အရှိုက်ထိသွားပြီး ပြန်ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်နော်။
” ၊ ” ဘယ်သူကအဖမ်းခံချင်မှာလဲခုအ ပြင်မှာနေရလို့ကူညီနိုင်တာလေး ကူညီလို့ရတယ်လေ နိုင်ငံရေးကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ လုပ်နေသူတွေကို အရမ်းလေးစားပါတယ်။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ဖရိုဖိုင် လော့ချပြီး လိုက်အော်နေတဲ့လူတစ်ချို့ကိုတော့ အရမ်းရွံတယ် ” လို့ ပြန်ပြောထားပါတယ်နော်။
ဆႏၵျပပြဲေတြမွာပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း လုံးဝအဖမ္းမခံရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကိုေထာက္ျပလာတဲ့ညီညီေမာင္ (စမ္း ေခ်ာင္း)
ပရိသတ္ႀကီးေရ သုသုလို႔ အမ်ားက ေခၚၾကတဲ့ မိတ္ကပ္ညီညီေမာင္ကေတာ့ အေမစုကိုခ်စ္ခင္သူတစ္ဦးပီပီေႏြဦးေတာ္ လွန္ေရးအစပိုင္းမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္ေနာ္။စစ္ေကာင္စီမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့အႏုပညာရွင္ေတြကိုဖမ္းဆီးအေရးယူတဲ့အခါမွာေတာ့သုသုတစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္ေနာ္။စစ္ေကာင္စီကက်င္းပတဲ့ သၾကၤန္ပြဲကိုသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ လိုင္းေပၚမွာ ပလူပ်ံခဲ့စဥ္ကလက္ရွိရိုက္ထားတာမဟုတ္ေၾကာင္းအေသအလဲ ျငင္းဆန္ခဲ့သူပါေနာ္။
မၾကာခင္မွာပဲအမွန္တရားေပၚထြက္လာတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုမွ ျငင္းမရေတာ့ဘဲ ဝန္ခံလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။ ပုံမွန္အတိုင္း ေနထိုင္စားေသာက္ရင္း အခုခ်ိန္က်မွ ကိုဗစ္ေရာဂါအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြ လႉဒါန္းရင္းလူဝင္ဆံ့လာေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါၿပီေနာ္။ ” ဆႏၵေတြျပၿပီး အဖမ္းလည္းမခံရဘူးေနာ္“ဆိုတဲ့ comment တစ္ခုေၾကာင့္ အရွိုက္ထိသြားၿပီး ျပန္ေျဖရွင္းလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။
“ ခံဝန္ထိုးရပါတယ္ အဖမ္းမခံနိုင္လို႔ သၾကၤန္သြားရပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိ ကြၽန္မေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ ဒုကၡမေရာက္ေသးပါဘူး ဘယ္သူမွ ေထာင္မက်ပါဘူး ဒါ့ေၾကာင့္ အျပင္မွာ ကိုယ္တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေန ကူညီေပးလို႔ ရေနပါတယ္။
” ၊ ” ဘယ္သူကအဖမ္းခံခ်င္မွာလဲခုအ ျပင္မွာေနရလို႔ကူညီနိုင္တာေလး ကူညီလို႔ရတယ္ေလ နိုင္ငံေရးကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ လုပ္ေနသူေတြကို အရမ္းေလးစားပါတယ္။ ေဖ့ဘုတ္ေပၚ ဖရိုဖိုင္ ေလာ့ခ်ၿပီး လိုက္ေအာ္ေနတဲ့လူတစ္ခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ အရမ္း႐ြံတယ္ ” လို႔ ျပန္ေျပာထားပါတယ္ေနာ္။
အဆိုတော်ဖြူသီရဲ့မောင်ဖြစ်သူ အဆိုတော်ရာဇာဝင်းတင့် ဒီနေ့(ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်)မနက် ၉:၅၀ နာရီကကွယ်လွန်သွားပြီလိုသိရပါတယ် ရာဇာဝင်းတင့်ဟာအိမ်ထောင်မပြုဘဲ သီချင်းတွေကိုဘဲချစ်ခင်ဖက်တွယ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
အဆိုေတာ္ျဖဴသီရဲ႕ေမာင္ျဖစ္သူ အဆိုေတာ္ရာဇာဝင္းတင့္ ဒီေန႔(ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္)မနက္ ၉:၅၀ နာရီကကြယ္လြန္သြားၿပီလိုသိရပါတယ္ ရာဇာဝင္းတင့္ဟာအိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ သီခ်င္းေတြကိုဘဲခ်စ္ခင္ဖက္တြယ္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္
ခိုင်းနှင်ဝေနဲ့သူရဲ့ချစ်သူကတော့နားရက်တွေမှာလဲအတူတကွဖြတ်သန်းကြပါတယ်။ချစ်သူကောင်မလေး ခိုင်နှင်းဝေကဆံပင်ရှည်မှကြိုက်တယ်ဆိုလို့အရှည်ထားနေရတဲ့ဇင်မြင့်အောင်က ဆံပင်ရှည်မှကြိုက်တယ်ဆိုတော့လဲ….ဆိုပြီးတော့သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။
ခ်စ္သူေကာင္မေလးက ဆံပင္အ႐ွည္ထားမွႀကိဳက္တယ္ဆိုလို႔ ဆံပင္အ႐ွည္ထားေနရေၾကာင္းကို ခ်စ္စဖြယ္ေျပာျပလာတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ႕ခ်စ္သူ
ခိုင္းႏွင္ေဝနဲ႔သူရဲ႕ခ်စ္သူကေတာ့နားရက္ေတြမွာလဲအတူတကြျဖတ္သန္းၾကပါတယ္။ခ်စ္သူေကာင္မေလး ခိုင္ႏွင္းေဝကဆံပင္႐ွည္မွႀကိဳက္တယ္ဆိုလို႔အ႐ွည္ထားေနရတဲ့ဇင္ျမင့္ေအာင္က ဆံပင္႐ွည္မွႀကိဳက္တယ္ဆိုေတာ့လဲ….ဆိုၿပီးေတာ့သူရဲ႕လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာပုံနဲ႔တကြေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အောင်လအန်ဆန် နိုင်ရင် ကြိုက်တာလုပ်ခိုင်း လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိအတိုင်း လုပ်ပေးတော့မည့် မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင်
ပရိသတ်ကြီးရေ…. ပုရိသတွေ ရဲ့အသည်းစွဲ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖူးပွင်ခိုင်ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ ခန္ဓာကို ယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေကပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ထူးခြားမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဆက်ဆီ ကျကျအမိုက် စားပုံလေးတွေဟာဆိုရင်လ ည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေပန်းစားလူကြိုက်များတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
သူမကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ်ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ်တစ်နေ့တစ်ခြားပိုပြီး ထူးခြားလှပလာတဲ့ ဖူးပွင့်ခိုင်ကပုရိသတွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို အပြည့် အဝရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်အများစု အားကျချစ်ခင်နေကြတာလ ည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ဖူးပွင့်ခိုင်က အောင်လအန်ဆန်းပွဲမစခင်မှာ အောင်လနိုင်ရင်ခိိုင်းချင်တာခိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ကတိတစ်ခုပေးလာခဲ့တာပဲဖြဟ်ပါတယ် ။
ပွဲအပြီးမှာတော့ အောင်လနိုင်သွားတဲ့အတွက် သူ့ကတိအတိုင်းလုပ်ပေးရတော့မယ့်အကြောက်းကို ‘မနေ့ကပြောထားတဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ဝက်ကိုတော့ အခုဖြည့်စည်းပေးလိုက်ပါပြီနော်ဆန် / ကြက်ဥ / ငါးသေတ္တာ /တမျိုးစီကို 100ကျပ် ဖြစ်ကြိုက်တာယူနိင်ပါတယ်Mask တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးHandgel တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးကFree ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ရှင်ဖူးနဲ့အတူကုသိုလ်ယူနော်မူဆယ်ဆိုပြီး “သူရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ပုံလေးတွေတင်ပြီ သူမရဲ့ ကတိတစ်ဝက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြင့် သီပေါဘုရင် နတ်ရွာစံ ကံတော်ကုန်ပြီ
သူ့ကျွန်မခံပြီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ သီပေါဘုရင် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာကျော်ငြိမ်းအေး ဟာ ဇူလိုင်လ ၃၁ရက်ေ န့မှာ ကိုဗစ်၁၉ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်…။
SSC ဆေးရုံမှာ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရင်းနဲ့ နံနက် ၆နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ…။
ဒေါက်တာကျော်ငြိမ်းအေး ဟာ မုံရွာမြို့ဇာတိဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် YIT က ဒေါက်တာဘွဲ့ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ AITမှ မာစတာဘွဲ့တွေကို ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအစာအဟာရသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအသင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှုး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ပါတယ်…။
(သီပေါဘုရင်နေရာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သူ့ကျွန်မခံပြီ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုသူများအတွက် Youtube ကနေ ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖင့္ သီေပါဘုရင္ နတ္႐ြာစံ ကံေတာ္ကုန္ၿပီ
သူ႕ကြၽန္မခံၿပီ ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားမွာ သီေပါဘုရင္ အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအး ဟာ ဇူလိုင္လ ၃၁ရေက္ န႔မွာ ကိုဗစ္၁၉ေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္ခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္…။
SSC ေဆး႐ုံမွာ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူေနရင္းနဲ႔ နံနက္ ၆နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တာပါ…။
ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအး ဟာ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ YIT က ေဒါက္တာဘြဲ႕ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ AITမွ မာစတာဘြဲ႕ေတြကို ရ႐ွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစာအဟာရသိပၸံႏွင့္နည္းပညာအသင္းရဲ႕ အတြင္းေရးမႈး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္ပါတယ္…။
အောင်လအန်ဆန်းကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဂျပန်ဖိုက်တာ ယူရှင်အိုကာမီ
အောင်လအန်ဆန်း ဟာ မနေ့ညက ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ဘရာဇီးဖိုက်တာ လီအန်ဒရို ကို ပထမအချီမှာပဲ အလဲထိုးနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။အောင်လအန်ဆန်း က ဒီပွဲအပြီးမှာ သူ့ကို ထိုးချင်နေတဲ့ ယူရှင်အိုကာမီ တို့အပါအဝင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပွဲစီစဉ်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ဖိုက်တာ ယူရှင်အိုကာမီကလည်း အဲ့ဒီပွဲအပြီးမှာပဲ အောင်လအန်ဆန်းကို စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ယူရှင်အိုကာမီ က “ဒါက စက်တင်ဘာလထဲက တင်ထားတာပါ။
မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းတက်ထိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ နေ့ထဲက ခင်ဗျားနဲ့ ထိုးသတ်ခွင့်ရဖို့ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ စောင့်နေတာပါ။ဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘာမှပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူး။အောင်လအန်ဆန်း ခင်ဗျားကို အနိုင်ယူမယ်”လို့ တွစ်တာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်းက‌တော့ မင်းငါ့ကို အနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့ မထင်ကြောင်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။